स्वमूत्रपान स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ ? यस्ता छन फाईदा - ejhajhalko.com
स्वमूत्रपान स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ ? यस्ता छन फाईदा
एजेन्सी– २२ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०५:५५ 111 पटक हेरिएको
एजेन्सी– हिन्दूहरूले गोमूत्र (गहुँत)लाई पवित्र मानेर प्रयोग गरेको त हामीले प्रत्यक्ष देखेरभोगेकै कुरा हो । तर, मानिसकै पिसाब पिउने कुरा मात्र गर्दा पनि अधिकांशलाई घिन लाग्न सक्छ । तर, कतिपय मानिसहरू स्वमूत्रपान गर्दा स्वस्थ भइने भन्दै त्यसको प्रयोग गर्दै आइरहेकै छन् ।
खाना पकाउने ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य घट्यो : कति घट्यो हेर्नुहोस ! 10 views
अछाममा जिप दुर्घटना हुदाँ ८ जना घाइते6views